CIN Khabar बन्दाबन्दीको पालना गर्नू, पानी धेरै पिउनू
बन्दाबन्दीको पालना गर्नू, पानी धेरै पिउनू कोरोनालाई जित्न आत्मविश्वास बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव, परिवारका सदस्यले मनोबल बढाउन सघाउनुपर्ने (अडियोसहित)
सीआईएन बुधबार, वैशाख ३, २०७७, ०२:१९:००
अमेरिकामा हालसम्म ६ लाखभन्दा धेरै नागरिकमा नोबले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ देखिएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६ हजार पुग्न आँटेको छ । उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या ४९ हजारभन्दा माथि रहेको छ । कोभिड १९ बाट त्यहाँ रहेका नेपाली पनि जोखिममा छन् । सङ्क्रमितमध्येका एक ३८ वर्षका नेपालीसँग साथी राजन रुचालले कुराकानी गर्नुभएको छः
अहिले कस्तो छ ? तपाईँलाई ?
अहिले मलाई ठीक छ । आज दस दिन भइसक्यो । ठीक छ ।
अहिले तपाईँ कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ कि घरमा हुनुहुन्छ ?
अहिले म घरमै छु । मेरो डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरी उहाँले ‘तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने वा स्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा मात्र अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ । नत्र भने घरमै आराम गर्न’ सुझाव दिनुभएको छ । स्वासप्रस्वाससम्बन्धी समस्या देखिएन, त्यसैले होमक्वारेन्टाइनमा बस्न भन्नुभएको छ ।
तपाईँमा कोभिड १९ भएको बारेमा कहिले थाहा भयो ?
सन् २०२० को अप्रिल ४ मा मचाहिँ काममा गएको थिएँ । होल फुड कम्पनीमा म काम गर्छु । अनि त्यहाँ कामबाट राति घर फर्किँदा कामज्वरो आयो । त्यसपछि सामान्य फ्लुमात्र होला भनेर मैले पनि खासै वास्ता गरिँन ।
५ र ६ तारिखममा मलाई लगातार ज्वरो आयो । त्यसपछि मलाई कोभिड १९ भएको हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो । त्यसपछि मैले मेरो पारिवारिक डाक्टरलाई फोन गरेँ ।
‘मलाई २ दिनदेखि ज्वरो आएको छ, के गरुँ ?’ भने । त्यसपछि उहाँले ‘ठीक छ । म तपाईँको समय मिलाउँछु । ३ घण्टापछि आउनुस् ।’
भन्नुभयो । त्यसपछि नजिकैको स्वास्थ्य संस्था प्राथमिक हेरचाहा भन्ने संस्थामा जचाउन गएको थिएँ । त्यसको पर्सिपल्ट उहाँहरूले ‘तपाईँलाई कोभिड १९ छ ।’ भनेर फोन गर्नुभएको थियो ।
कोभिड १९ भएको थाहा पाउनेवित्तिकै कस्तो महसुस हुँदो रहेछ ?
अलिकति डरचाहिँ लाग्दो रहेछ । किन कि यसैको वरिपरि विश्व घुमिरहेको छ । टिभि, रेडियो, पत्रपत्रिका जता पनि यसैका बारेमा समाचार आउने गरेका बेलामा, यसको उपचारै छैन, औषधि छैन भन्ने गरेको बेलामा सुरुमा म पनि विचलित भएको थिएँ ।
कोभिड १९ लाई जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि त्यसपछि के कस्तो उपाय अपनाउनुभयो ?
त्यसपछि मैले समाचार पढ्न थालेँ । मृत्युदरको बारेमा जानकारी लिन थालेँ । ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको मृत्युदर धेरै हुन्छ भन्ने जानकारी समाचारबाट लिइरहेको हुन्थेँ । यो भाइरसको सङ्क्रमण भएका बिरामी निको हुने गरेको खबर पनि मैले हेरिरहेको हुन्थेँ ।
त्यस हिसाबले आत्मबल बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढायो भने यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने बारेका खबर पढेपछि मैले आत्मविश्वास बढाउनेतिर सोच्न थालेँ ।
तपाईँ अहिले कति वर्षको हुनुभयो ?
म अहिले ३८ वर्षको भएँ ।
कुन ठाउँमा बसिरहनुभएको छ अहिले ?
म अहिले अमेरिकाको बोस्टन, मासाचुसेट्समा बस्दैछु ।
नेपालमा पनि अहिले कोभिड १९ का कारण नागरिक त्रासमा छन् ? तपाईँ यसको सङ्क्रमण भएर निको हुने तर्खरमा हुनुहुन्छ, नेपालीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
अहिले कोभिड १९ ले विश्वभरमा नै धनी, गरिब केही पनि भनिरहेको छैन ।
यसको रोकथामको उपाय भनेको लाग्नु अघि र लागिसकेपछि भन्ने हुन्छ । पहिलो कुरा लाग्न दिनु नै भएन । नेपालमा पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गरेको अवस्था छ ।
सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको नागरिकबाट पालना हुनुपर्‍यो । हात पटकपटक सफा गर्नुपर्‍यो । पानी प्रश्स्त पिउनुपर्‍यो । यदि घाँटीमा सङ्क्रमण छ भने त्यसलाई पेटमा लगेर एसिडले मार्छ भन्ने गरिएको छ ।
अदुवापानी पनि पिउन सकिन्छ । आत्मबल दह्रो बनाउन सकियो भने जोगिन सकिन्छ ।
तपाईँ घरमा छुट्टै बसिरहनुभएको छ अहिले ?
मेरो डक्टरले छुट्टै बस, कसैको सम्पर्कमा नआइज भनेका कारणले छुट्टै कोठामा बसेको छु । श्रीमतीले मास्क प्रयोग गरेर खाना ल्याएर छोड्दिनुहुन्छ । त्यही खाइरहेको छु ।
यो बेलामा परिवारका सदस्यको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
यस्तो बेलामा परिवारका सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ । किनभने सरसफाइमा ध्यान दिनेदेखि बिरामीको आत्मबल बढाउनका लागि पनि परिवारका सदस्यको भूमिका हुन्छ ।
कोभिड १९ लाग्यो भनेर मनोबल गिराउने काम गरेपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनसक्छ । त्यसहिसाबले परिवारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अडियो कुराकानी सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ३, २०७७, ०२:१९:००